Starbucks: Sicir bararka iyo Qiime dhaca Nooca | Martech Zone
Starbucks: Sicir bararka iyo Qiime dhaca Nooc
Talaado, Agoosto 5, 2008 Talaado, Juun 23, 2015 Douglas Karr
Mareykanku runtii ma uusan fahmin kafeega waayeen dhadhamin sida. Mashiinka qaxwaha ayaa lagu kariyey jajab muddo dheer taas oo gacan ka geysatay sare u qaadista faa'iidada shirkadaha kafee. Waxaan haystay saaxiibkay oo ka shaqeeya warshad wax lagu karsado oo ka shaqaysa qalabka buuxiya oo xidha kontaynarrada qaxwada. Wuxuu ii sheegay in ay beddeleen magacyadii habeenkii oo dhan, laakiin waligood kama badalin digirta. Dhammaanteen waxaa naloo quudin jiray wax isku mid ah, oo lagu qariyey gasacado kala duwan oo kafee ah.
Kadib wuxuu yimid Kafee Weyn
Waqtiga aan bilaabay inaan fiiro gaar ah u yeesho sida kafeygu dhadhamiyay wuxuu ku saabsanaa waqtiga aan helay Shirkadda Norfolk Coffee & Shaaha. Ilaa maantadan la joogo waxaan kuu sheegayaa inaysan jirin wax u eg sida digirta duban ee toosan looga helo foornada.
Haddii aad u maleyneyso inay tahay mowjad cusub, meel casri ah oo qaxwaha lagu kulmo iyo hobnob, xaqiiqda kama fogaan kartid. Gudaha gudihiisa waxay u ekaayeen warshad lagu xadgudbay… waxaa jiray daaha kafeega iyo boodhka looska wax kasta oo aad eegto. Si fudud ayaad u soo gashay, waxaad dalbatay boorsadaada sagxadaha ah, waadna baxday. Wax fikrad ah kama haysto meesha digirtu ka timid, laakiin waxay ahaayeen kuwo cabsi badan. Milkiilayaashu waxay i bareen wax ku saabsan kafee-sameeyayaasha cusub ee bannaanka ku yaal oo aan lahayn dab-damiyayaal iyo karafaska dahaaran. Ma jiro qaxwo gubtay. Mmmm.
Kadib Wuxuu Yimid Starbucks
Waqtigaan oo kale, waxaan u guuray Denver waxaanan uga tagay daahfurka cusub ee aan helay. Denver, waxaan ka raadiyey xoogaa rooti kafee ah laakiin isku mid maahan. Starbucks ayaa yimid magaalada, in kastoo, waxaan u helay dhadhan digirta gubatay ee 'baagaga'. Uma maleynayo inaan waligey laqabsadey kharashka ama dhadhanka digirtaas, in kastoo! Waxaan ku qarash gareynayey 10 jeer lacagta kafeega sidii hore!
Waan ka helay dukaamada. Waxaan jeclaa fadhiista, galida wireless-ka (ka hor intaysan lacag ka qaadin), iyo inaan xoogaa shaqo ah qabto. Halkaas ayey ku garaaceen muusig qabow (ka hor intaysan iibin).
Kadibna Wuxuu Yimid Kuraas Adag
Ku laadlaada Starbucks markii ugu horeysay ee ay fureen waxay ahayd mid quruxsan. Kuraasid kuraasta oo dhan, adoo ka dhigaya meel wanaagsan in lagu qabto kulanka aan loo baahnayn. Kuraasta raaxada leh waxay dadka ku casuuntay inay waqti badan ku qaataan Starbucks, in kastoo. Waxaan aqriyay in goobo badan oo tafaariiqda ah ay dhigtaan kuraas adag si dadku aysan u sii joogi doonin inta. Starbucks waxay u wareegeen bakhaarro waawayn iyo kuraas adag oo leh fadhi kursi nugul agagaarka.
Kadib waxaa yimid Auto-Shots
Waxaan xasuustaa astaamihii waaweynaa ee kugu salaamayey 'bucks':
Baristaada waa Jane
Jane waxaa laga yaabaa inay yeelato timo cagaaran oo faro badan iyo dhowr waxoogood oo ay ku mudayaan meelo aan caadi aheyn, laakiin markii ay toogatay, waxaad daawaneysay iyadoo ku tababaraneysa farsamadeeda. Waxay ka wada hadli laheyd waxyaabaha aad jeceshahay iyo waxyaabaha aad neceb tahay xulashooyinka cabitaanka waxayna kuu soo jeedin doonaan dhowr talo oo ku saleysan khibradeeda qibrada leh. Waxaad dareentay qabow kaliya inaad halkaas joogto oo feejignaan lagaa siiyay. Waxaad dareentay mid gaar ah.
Laakiin khadadka ayaa sii weynaaday safka isku imaatinkuna waa inuu noqdaa mid hufan. Mashiinno cusub ayaa si otomaatig ah dhulka loo keenay, oo la buuxiyey oo la shubay tallaalka. Sixirku wuu dhammaaday… wax aan dhammaystirnayn, ma jiro tallaallo waqti dheer qaatay, aad u gaabnaa ama sababo badan lahaa. Kaba sii darane, baristasku waxay lumiyeen aqoontooda farsamada gacanta. Barista's kamay yarayn fanaaniin marka loo eego qof ku rogmadaya burger King xaafada.
Kadib Waxaa Yimid Tafaariiqda
Markii aad safka soo istaagtay, waxaa hadda kugu hareereeyay jawaano digir ah, koobab, koob, weelal dahaaran, shukulaato, kafee sameeya, mashiinno espresso, CD-yo muusig, joornaallo… Bakhaarku wuxuu bilaabay inuu u ekaado sidii dukaan ka badan kan kaalinta saddexaad, meesha ka baxsan guriga iyo shaqada meesha aan doonayay inaan waqti ku qaato.
Kadib Waxaa Yimid Wadooyinka-Wadayaasha
Khadadka ayaa aad u dheeraa si wada hadal loo sii wado. Baristas aad ayey mashquul ugu ahaayeen inay ku bartaan. Isbeddelada baristooyinka cusub ayaa yimid oo tagay, "Baristaada ayaa ah" ayaa laga tagay iyada oo maran. Si loola dagaallamo khadadka, wadista-dhexdeeda ayaa la rakibay. Way ka sahlan tahay. Way ka dhakhso badan tahay. Faa’iidooyinka waaweyn. Macaamiil badan.
Ma jirin wax ikhtiyaar u ah dhadhaminta waxyaabaha caadiga ah ee loo qoondeeyay inaad jeceshahay. Kaliya kan caadiga ah cabitaanka lagu taliyey ee maalinta ama ku noqosho keeg kafee ah.
Maya mahadsanid. Aan dufan lahayn, karbaash lahayn, grande mocha fadlan.
Sideed doolar, gawaari ku wareeji.
Waxaan dhageysan lahaa raadiyaha markaan wareego oo aan u dhiibo lacagteyda iyo madaxeyga shaqada. Salaan malaha, wadahadal jawiga ah. Kaliya aniga iyo gaarigeyga. Sixirkii wuu baxay. Starbucks, waaya-aragnimadii aan ku ogaa, ayaa dhimatay.
Runtu waxay ahayd inaanan ogayn inaan runtii ku jiray Starbucks qaxwada. Oh - Waxaan u baahday hagaajinteyda sida dadka kale oo dhan, laakiin waxaan jeclahay astaanta, qaabka, shakhsiyadda guriga kafeega. Waan jeclaa inaan aado halkaas maxaa yeelay waxaan dareemay muhiim. Markaan bixiyay $ 5 cabitaan qaas ah, waxaan dareemay xitaa muhiimad intaa ka sii weyn.
Meel jidka ah, Starbucks wuxuu bilaabay inuu xiirto takhasuska gaarka ah markiisa macaashka iyo waxtarka. Waxay joojiyeen samaynta me muhiimad dareemid. Waxay joojiyeen samaynta me dareen gaar ah. Waxay joojiyeen inay ahaadaan kuwo gaar ah. Starbucks waa sheeko layaableh - waxay kordhiyeen qiimaha cabitaanka guud waxayna naga heleen dhamaanteen. Laakiin way ina hayn kari waayeen. Kobaca, macaashka iyo waxtarka ayaa la wareegay ugu dambayntiina wax kasta oo ka mid ah bakhaarrada ayay kala baxeen oo ahaa mid gaar ah.
Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in Starbucks uu qiimeeyay naftiisa, cid kale oo aan sameynin. Ma jiro tartame u soo galay oo la tartamay. Goorma Schultz soo laabtay Janaayo, rajo weyn ayaan qabay. Waa hagaag.
Kadib Qiima dhimista ayaa timid
Maanta, Starbucks waxay bilaabeen inay bixiyaan a $ 2 galab cabitaan haddii aad soo qaadato risiidh laga bilaabo subaxa hore. Waxaan u istaagay qadada Starbucks maanta waxaanan helay rasiidkaygii shaabad ku soo galay goor dambe. Marnaba ma sameyn.
Waxaan u maleynayaa inaan nooc ka mid ah garaacnay musbaar madaxa, ayuu yidhi Brad Stevens, madaxweyne ku xigeenka maaraynta xiriirka macaamiisha. Way fududdahay baristas in la hirgaliyo waana sahlan tahay macaamiisha inay fahmaan.
Si fudud. Haa, waa jawaabta. Waxaan rabaa inaan ku bixiyo wax fudud.
IMHO, Waxaan u maleynayaa in Starbucks uu garaacay finalka musbaaska sanduuqa. Iyagu mar dambe khaas uma aha inay kugu soo dallacaan $ 5 cabitaan, hadda waxay bilaabeen inay yareeyaan sheyga keliya ee ugu weyn ee ay tilmaameen. Waa maalin murugo leh Starbucks.
Kadib waxaa yimid Aqalka Qaxwada Gaarka loo leeyahay
Waxaan tan ku qorayaa guriga kafeega ee aan ugu jeclahay adduunka, oo ah dukaan gaar loo leeyahay. Caawa, barista Cassie wuxuu ii sameeyay soodhadh Talyaani ah oo qaali ah oo aniga ii ah iyada oo ku saleysan dood ku saabsan waxyaabaha aan jeclahay iyo waxyaabaha aan necebnahay (in ay sifiican u garaneyso). Alayna waxay iga dhigtay sandwich rooti duban hilib duban oo cajiib ah bakeel la shiilay (oo aan ku jirin liiska).
Waxaan ku qoray qoraalkan dhan wireless-ka bilaashka ah waxaanan fadhiistay qayb waqtiga kamid ah kursi weyn oo barafaysan. Cassy iyo Alayna waxay la sheekaysanayaan, magac ahaan, macmiisha oo ay shubayaan darbooyin (oo dib u soo celinayaan haddii ay dheer yihiin ama aad u gaaban yihiin), iyaga oo si taxaddar leh ugu xirxiraya huurka.
Waxaa jira sheeko muhiim u ah halkan shirkadaha kale. Si fudud kuma sii wadi kartid inaad ku dallacdo "qaas" ka dibna waxaad ku foorarsataa wax kasta oo qaas ah. Starbucks wax qiimo dhimis ah kuma sameynin galabtii kafeega galabta, waxay sii qiimeeyeen sumcaddooda xitaa intaas ka sii badan.
Waa maalin murugo leh Starbucks, laakiin maalin weyn oo loogu talagalay dukaanka kafeega madaxa-bannaan. Marnaba dib ugama aanan noqon oo waxaan helay cabitaankaas $ 2 ee galabta.
Tags: baristabrandqiime dhaca sumaddasicir bararka sumaddakafeegatafaariiqdastarbucks
Waad ku mahadsantahay wanaagga asxaabta!
Meheradda “Kaararka” ee Cusub Waa Halkaan!
Aug 6, 2008 at 7: 28 AM
Waan ogahay waxa aad u jeedo, waxaan isku dayay xarig-jireed "espresso", maxaa yeelay waxaan u maleeyay in aysan jiri doonin waddo sidan oo kale ah oo silsilad caan ah ay ku noqon karto mid xun. Waxayna ahayd. Laakiin waxaan aadayaa meel wanaagsan oo ku taal Sydney, halkaas oo ay ku dubtaan digirta ku jirta kafeega, magacaygana way igu yaqaanaan. Way fiicantahay.
Agoosto 12, 2008 saacaddu markay ahayd 5:02 PM
Barista ayaan ahaa ku dhowaad toban sano. Waxaan ka soo shaqeeyay mid ka mid ah meheradaha ugu wanaagsan ee qaxwaha aan waligey soo maray, waxaanan arkay waxa ka dhigaya kafeega weyn. Waxaan ka shaqeeyay Starbucks ilaa laba bilood hal xagaa, anigoo aan waxba ka ogeyn. Aniga lahaa inuu shaqadaas ka tago. Xirfad kasta oo aan ku soo qaatay waayo-aragnimadaydii Baritsa markii aan xirtay daaqadda ayaan ka baxay daaqadda. Shaqadaydu shaqo kuma lahan kafeega (taas oo ahayd wax laga naxo). Waxaan dhihi karaa 90% shaqada, maalin walba, waxay inbadan ku xirneyd kor u qaadista iyo "u ekaanshaha" mashquulka.
Ma aqaano sababta qof kasta u aadi doono Starbucks marka laga reebo inay iyagu si fudud u garan waayaan wax ka fiican mooyee. Waxaa jira dukaamo yar yar oo si gaar ah loo leeyahay oo kafee ah kuwaasoo dambi ka galay isla isla wax kastoo. Meesha aan ku noolahay, ma jirto hal meel oo kaliya oo laga heli karo koob fiican oo kafee ah.
Aug 6, 2008 at 9: 11 AM
Waxaan ku helay isla dalabkaas iimaylka oo waa inaan joojiyaa inaan ka fikiro haddii aan waligey noloshayda u aaday Starbucks laba jeer hal maalin.
Agoosto 6, 2008 saacaddu markay ahayd 12:24 PM
Waxaan si buuxda ugu raacsanahay faallooyinkaaga ku saabsan ganacsiga Starbucks. Waxaan aaminsanahay in inta badan macaamiisha halkaas joogta ay ku raaxeysteen “waaya-aragnimada” Starbucks, ee ma ahan qaxwada. Waxay tahay wax lala yaabo in ay si dhakhso leh u siiyeen dadyowga oo ay tahay inaad meel kale u aado khibradaas hadda.
Maan isku dayin Koobka Bean-ka, laakiin dhawaan waxaan joojiyay shirkadda Monon Coffee. Waxaan si aad ah ugula talinayaa inaad siiso tallaal haddii aad waligaa ku jirto aagga Broad Ripple.
Kaniisada Dim Sum
Agoosto 6, 2008 saacaddu markay ahayd 12:44 PM
Waxaan diyaar u ahay inaan iibiyo saamiyadayda Starbucks. Uma maleynayo inay soo kaban karaan. Waxaa laga yaabaa inay leeyihiin sumad sumadeed, laakiin markay bilaabaan inay xidhaan dhawr kun oo dukaanno ah, waad arki kartaa inay xumaddu qarxday.
Maalmahan waxaan qaxwahayga ku cunayaa guriga. Waa raqiis iyo madadaalo.
Agoosto 6, 2008 saacaddu markay ahayd 2:40 PM
Waxaan u shaqeyn jiray Starbucks… Hada xitaa kuma sii jiro. Waxaan ka doorbidayaa Beerida Beerta halkaas oo aad wax ka dalban karto waxkastoo aad jeceshahay baristooyinkuna way ogyihiin waxa ay ka hadlayaan, sida ay tahay! Iyaguna waxay leeyihiin wireless bilaash ah, meelo badan oo raaxo leh oo aad naftaada dhigatid, iyo dukaan jalaato cajiib ah oo ku xiga albaabka. Waa xaalad guul-guul-guul ah.
Agoosto 6, 2008 saacaddu markay ahayd 3:33 PM
Waxaan ahay milkiilaha makhaayad yar oo madax banaan oo ku taal magaalo yar (Dillard, GA). Waxaan siin karaa macaamiishayda dareenka ay rabaan, (ama asturnaanta) Waxba igama gelin haddii ay maalintii oo dhan ku sii jiraan WiFi hal koob oo kafee ah, waxaan hagaajiyaa amarada gaarka ah sida ay iyagu u doonayaan, oo way soo noqdaan iyo in ka badan! Yaab weyn, eh? Ganacsigan, sida ugu dhow dhammaan ganacsiyada, adeeggu waa wax walboo !!!!
Agoosto 10, 2008 saacaddu markay ahayd 4:50 PM
Waxaad ku garaacday ciddiyaha naxashka Starbuck midig madaxa. Shakhsi dambe malahan meesha markii hore ahaan jirtay. Dib-u-habayn dambe ma lahan sidii markii hore ahaan jirtay. Halkii ay ka furi lahaayeen bilyan bakhaar, waxay samayn lahaayeen lacag aad u badan oo qaar iyaga ka weyn, oo ay weheliyaan shaqaalaha. Waxay u maleynayeen inay 'ku xirmanayaan' kafee qabatimay, laakiin macno ahaan naftooda ayay dhulka ku carareen iyagoo ka qaadaya wax kasta oo iyaga ka dhigay kuwo gaar ah. Ma rabtaa macaamiil? Halkaas ayey ku maqan yihiin !! Laakiin waa inaad bixisaa wax aan cid kale haysan, oo ugu yaraan u dhaqan sida inay yihiin macaamiisha ugu fiican abid! Waad guuleysan doontaa intaad ku heesaysid manta s ..qadiyada IS wax walboo.
Agoosto 6, 2008 saacaddu markay ahayd 6:46 PM
Maqaal weyn. Runtii "dhidibkii madaxa ayaad ku dhufatay" !! Waxaan aad u doorbidaa inaan aado guryaha yar yar ee bunka. Badanaa way waasac yihiin waxayna qado iyo casho u fidiyaan.
Waxaa jira dukaan aad u fiican oo ku yaal Munising, Michigan oo leh dukaan buug lagu iibiyo. Waad ku dhex socotaa, amarkaaga dhigtaa, waxaadna dhex dhex mushaaxi kartaa buugaagta buugta lagu qoro inta aad sugayso.
Agoosto 6, 2008 saacaddu markay ahayd 9:29 PM
Waxaan ka imid dhaqan meesha cabitaanka kafeega ay tahay wax weyn, waxaad aadeysaa boqolaal ka mid ah dukaamada qaxwada, ka dalbo Cappuccino, Espresso ama Macchiato wax ka yar lacag yar, waxaan la hadlayaa qaxwo tayo fiican leh, ma jiro shahwad macaan oo magac leh oo u baahan a Barnaamijka Rosetta Stone si loo barto lingo.
Halkan Arizona, Starbucks waxay ku yaalliin suuq kasta oo laga dukaameysto, dukaamada cuntada iyo waxkasta oo baarkinka la dhigto. Waxaan u arkaa naftayda inaan joojiyo subax kasta qaxwada dheer oo ay weheliyaan hooyooyinka kubada cagta oo quraac u siiya dhallaankooda iyo carruurtooda.
Qaxwada Starbucks ma laha dhadhan joogto ah, xaqiiqda dhab ahaan waxay u dhadhamaysaa runtii inay xun tahay mooyaane haddii aadan helin 5 $ Mocha Cappu? leh Karmel wax.
waxaa laga yaabaa inay tahay istiraatiijiyad suuqgeyn ah oo ay ku dhadhamin karto qaxwaha fudud ee la kariyey si aad ugu kicin karto cabitaanka $ 5, haye ha iloobin sandwich-ka hilib doofaarka hilibka doofaarka leh ee bilaashka ah 'cusub'
Douglas, waad ku mahadsan tahay wicitaanka tooska ah
Agoosto 6, 2008 saacaddu markay ahayd 9:33 PM
Waxaad igu qasabtay inaan ku xiro boostadaada oo dhan. Qoraal wanaagsan. Waxaan ka shaqeeyaa naqshadeynta websaydhka bangi weyn, waxaanan arkaa waxyaabo badan oo isbarbar dhiga qiimaynta. Waxaan u gudbin doonaa tan asxaabta.
Agoosto 6, 2008 saacaddu markay ahayd 11:26 PM
Aad baad u mahadsantahay, Eric!
Aug 7, 2008 at 3: 09 AM
Marnaba uma tago Starbucks maxaa yeelay weligay ma cabbin kafee iyo maxaan u bixiyaa wifi markii ay bilaash tahay meelo kale?
Laakiin si run ah waxaan u maleynayaa in dhibaatadu ay tahay suuqyada dadweynaha. Maalgashadayaashu had iyo jeer waxay dalbanayaan koritaan mana daneeyaan waxyaabaha gaarka ah ee yar ee gaarka ah ee aad ka rabto shirkadaha ay hayaan. Haddii saamiyadoodu aysan ka korin qiimaha ka weyn S&P waxay ceyrinayaan maamulka waxayna la soo baxayaan qareennada.
Dhibaatadu waa marka aad heer gaar ah gaarto oo kaliya ma sii wadi kartid inaad ku korto isla heerkaas. Iyada oo boqolkiiba 95% saamiga suuqa xageed ka heli doontaa kobaca 10%? Marka maamulku wuxuu bilaabaa jarista geesaha, xiirashada qarashka, helitaanka cheesier leh hababkiisa. Taasina si gaar ah ayey run u tahay haddii aasaasaha iyo / ama kooxda maaraynta ee leh akhlaaqda guuleysata aysan sii joogi doonin hoggaanka (kaliya eeg Apple inta lagu jiro maalmaha John Sculley.)
Marka xaqiiqiyan maahan Starbucks inuu isdilo, waxay ahayd dabeecadda bahalka suuqyada dadweynaha ee maalgashadayaashu ay si buuxda uga furan yihiin wax lug ah oo ku saabsan howlaha shirkadda oo kaliya ay dalbadaan inbadan, inbadan, inbadan.
Waa ku filan tahay inaad ka dhigto hanti-wadaage himilo leh inuu doonayo inuu gaar ahaado.
Agoosto 7, 2008 saacaddu markay ahayd 3:15 PM
Mike isku raacay. Filim aad ufiican (oo leh walxo aad ugaharsan bartamaha laakiin wali waan ku riyaaqay) waa Shirkadda. Fariin muhiim ah oo ka dambeysa filimka ayaa ah in Shirkaduhu ay nool yihiin, hay'ado neefsanaya oo kaliya ku kora macaashka. Ma jiraan wax sax ah ama khalad ah oo ka socda shirkad, kaliya faa'iido leh ama aan faa'iido lahayn. Taasi waa wax cabsi badan maxaa yeelay waxay ku dhowdahay inay ku fashilanto macaamiisha!
Aug 7, 2008 at 8: 35 AM
Waan ku raacsanahay Eric, kani wuxuu ahaa qoraal si fiican u qoran oo soo jiidasho leh kaas oo leh qodob sax ah. Waxa aan rabo inaan ka ogaado waa sababta Starbucks weligeed u kacday meesha ugu horreysa… waa dad si aad ah u doonaya inay dareemaan dareemo gaar ah oo ay tahay inay bixiyaan (wax badan!) Maahan qaxwada qaar, laakiin waxaa fiiro gaar ah u leh qofka kafeega sameynaya? Ma jeceshahay oo ma neceb tahay si aad u muhiim ah oo aad ugu baahan tahay in lagu metelo kaafigaaga? Kaliya waxaan usbuuc ku qaatay xeebta aniga iyo sodogtay isaguna subax walba wuxuu sameeyay kafee kii ugu xumaa (Chock Full o'Nuts, maxaad ugu yeeri laheyd kafee kaas?) Subaxaana aamusnaanta ah ee la sheekaysanaya waxay ka dhigteen qaxwada qaar wixii ugu fiicnaa ee aan abid soo maro. Waqti iyo lacag ku bixi saaxiibbada iyo qoyska, waxay kaa dhigi doonaan dareen gaar ah.
Agoosto 7, 2008 saacaddu markay ahayd 3:12 PM
Faallooyin waafiican waana ku raacsanahay. Waxaa jira buug uu Schultz kaga hadlayo guryaha kafeega inay noqdaan 'kaalinta saddexaad'. Waa goob aan kula kulanno saaxiibo ka baxsan shaqada iyo dibedda gurigeenna. Waxay ahaan jirtay baarka maxalliga ah ama baarka ay ku dhacdo tan, laakiin Starbucks ayaa taas ka qaadatay.
Khibradeyda waa lala yeesho asxaabta iyo qoyska - laakiin inta badan waxay ku jirtaa jawi diirran oo ka baxsan guriga oo siiya dareen xoog leh. Waxaan joognaa guryaheena iyo shaqadeena maalin kasta… waxaan u baahanahay meel kale oo aan aadno. In muddo ahba, meeshaasi waxay ahayd Starbucks.
Agoosto 7, 2008 saacaddu markay ahayd 12:12 PM
Idinkana wax fikrad ah kama lihid sida ay ugu adag tahay barista farshaxanka inay sameyso isbedel weyn (sababtoo ah "dhaqaalaha") oo laga helo makhaayad maxalli ah oo ay ku yeelan karto timo cagaaran, daloolin, iyo farshaxan kaamil ah oo loogu talagalay otomaatiga, shirkadaha -robot adduunka Starbucks… Way nuugtaa.
Agoosto 7, 2008 saacaddu markay ahayd 2:39 PM
Waxaan u maleynayaa in hirarku is badalayo oo aan rajeynayo maestro sida aad maalin uun iigu shubatid tallaal!
Agoosto 7, 2008 saacaddu markay ahayd 1:03 PM
Hah. Waxaad ku nooshahay Indianapolis. Ma aanan aadin The Bean Cup waqti aad u dheer.
Aug 8, 2008 at 11: 06 AM
waligay maan noqon xiddig lama kacaan. rajaynaynaa inaan dhinto adigoon waligaa kaheyn $ 5 1,000 kafee kafee ah oo lagahelayo xididdada.
waxaan cabaa kafee. madow. yuban waxay u muuqataa mid kufiican dukaanka raashinka. iyo dheriga laga bilaabo subaxda hore waa mid fiican wakhti kasta inta lagu jiro maalinta aad dib ugu kululeyso microwave-ka.
Waxaan ka fikirayaa sidii aan u heli lahaa warshad sameeyaha qaxwaha faransiiska. taasi waxay noqon doontaa maalinta aan aniguba ahay qaxwo.
Agoosto 8, 2008 saacaddu markay ahayd 2:47 PM
La socoshada dadweynaha, waa qayb ka mid ah teknoolojiyadda sare / isku-xirnaanta sare. Waana tilmaam intee in le'eg ayay bulshada dhabta ahi u leedahay dadka. Macaamiishayada Rubicon waxay rabaan isku xirnaansho iyo latalin sidoo kale smarts iyo habab markay nala shaqeeyaan.
Waa tan waxa aan u qaato bulshada - http://tinyurl.com/58skzn
Agoosto 8, 2008 saacaddu markay ahayd 2:49 PM
Boostada Weyn. Tani waxay isu rogtay mid ka mid ah baloogyada aan ugu jeclahay akhriska!
Kaliya waxaan aadaa Starbucks markaan iloobo inaan dhigto dherigayga kafeega habeenka ka horeeya. Wadada loo maro khadku waa sahlan yahay subaxdii shaqada. Mid ka mid ah waxyaabaha laga sheegayo wifi-ka bilaashka ah ayaa ah in dhammaan Starbucks-ku aysan mar dambe haysan. Waxaan u aaday Wifi mid ka mid ah wadada usbuucii la soo dhaafay aadna waan u niyad jabay. Waxaan aaminsanahay Starbucks inay tahay mid ka mid ah shirkado badan oo si fudud uun u lumay jidkoodii iyagoo si dhakhso leh u koraya.
Iyagu hadda waa iska caadi.
Agoosto 8, 2008 saacaddu markay ahayd 4:28 PM
Ku mahadnaq ammaanta, Kyle!
Akhriste Xiiso badan
Aug 10, 2008 at 1: 42 AM
Maqaal Cajiib ah. Waxaa jira cashar sidan oo kale ah oo qoto-dheer iyo sharaf-dhac ah oo loogu talagalay dhammaan ganacsiyada kuwaas oo doonaya inay sii wadaan sii-kordhaya dhaqso iyo dhaqso badan .. Waxay ahayd wada sheekeysi cajaa’ib leh tonite Cup. Wax yar ma ogeyn, in su'aalaheyga ku saabsan walxaha Webka ay ii rogi doonaan faahfaahin dhab ah oo wanaagsan. Mahadsanid.
Agoosto 10, 2008 saacaddu markay ahayd 11:48 PM
Xaqiiqdii waad saxantahay. Marnaba ma aanan aheyn taageere Starbucks markii ugu horeysay. Waqtiga qofku u yimid Terre Haute, waxay horey u ahayd silsiladdaas waalan. Weligaa waxaad ku jirtaa Terre Haute, ku dhufo Meelaha Qaxwada ama Java Haute. Labaduba wali waa kuwo maxalli ah oo waxay leeyihiin hal cadaab oo ah qaxwo aan dhammaystirnayn. Xitaa markaa inkasta oo, haddana waxaan arkay ganacsigii labada. Labadooduba waxay raadinayaan inay la tartamaan Starbucks heer uun aniguna eedayn maayo. Waxaa jira seddex 'halkan' hadda iyo laga yaabee afar dukaan oo kafee ah. Taasi waa rooti yar oo la jarjaro.
Agoosto 11, 2008 saacaddu markay ahayd 11:19 PM
Waxay u egtahay sida kooxda aad jeceshahay. Marka hore, waad jeceshahay inaad aragto iyagoo ciyaaraya maxaa yeelay waxay ka ciyaarayaan meel aad aadi karto oo aad naftaada kula raaxeysan karto asxaabta iyo cabbitaanka waxayna ku ciyaaraan muusig aad u fiican. Waxay dareemeysaa inay adiga uun kuu dhigayaan riwaayad. Kadib waxay helayaan wax yar oo caan ah waadna ku faraxsan tahay sababtoo ah waxay leeyihiin fiidiyoow muusig waxayna iibinayaan albumyo yar oo dheeri ah. Kadib way nuugtaa maxaa yeelay heesahooda waxaa wada qorayaasha wax soo saarayaasha waaweyn waxayna ku ciyaaraan garoomo waawayn oo dhawaqoodu aad u xun yahay baarkinkuna waa socod 5 mayl u socda goobta. Wax kasta oo wanaagsan waa wax soconaya… ku raaxayso intaad karto!
Aug 12, 2008 at 7: 26 AM
Maqaalkaagu waa sax goobta. Majiro Khibrad Starbucks mar dambe, waligeyna xitaa ma jeclaan digirta gubatay inaan ku bilaabo.
Marka waxaa laga yaabaa in dukaan weyn oo geesinimo leh oo kafee ka furan uu ka furan doono mid ka mid ah goobaha ay ka baxayaan Starbucks, oo tusa sida ay tahay in loo sameeyo!
Agoosto 12, 2008 saacaddu markay ahayd 1:41 PM
Aniguba waan jeclahay “dukaamada qaxwada dhabta ah” (Starbucks, ugu yaraan aniga ahaan, uma qalmo). Waxaan ku noolahay dhowr… dhammaantood waxay u adeegaan Certified Fair Trade, qaxwaha qaxwaha koray. Waxaa jira shay sixir ah oo kusaabsan naftaada oo kugu xeeran shirkad weyn, kafee weyn (taasi waa in kabadan sida ugu macquulsan oo aan burburin kaymaha roobka isla markaana aan taageerin kuwa beeraha), iyo wireless-ka halkaad ku fariisato kursi duug ah laakiin raaxo leh… waa CAAFIMAAD!
Aug 13, 2008 at 5: 26 AM
Mareykanka waxaan ku cabi jiray qaxwada kaliya Starbucks. Waxaan jecelahay jawiga
Aug 13, 2008 at 11: 13 AM
Haa, runtii weligay majeclayn Starbucks, laakiin aad ayey ugafiicanayd kahor - in kasta oo dukaamada Massachusetts dhammaantood ay u muuqdaan sida aad xasuusato. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa inay gacan ka geysaneyso sidii loo ilaalin lahaa dukaamada yar yar, sida daciifka u ah sida caadiga ah.
Agoosto 13, 2008 saacaddu markay ahayd 11:54 PM
Waxaan ka imid Gobolka Washington, dhulka 5-ta makhaayadood ee ku yaal gees walba. Rabitaankooda ugu cusub ee aagagga yaryar ayaa ah dukaan lagu iibiyo Qaxwada. Waxay leeyihiin sariiraha raaxada leh ee dabka qallalan iyo isku-dubbaridka ballaaran ee ciyaaraha guddiga. Waxaa jira kooxo toos ah dhamaadka usbuuca oo haa waad ku qaban kartaa shaqadaada halkaas.
Starbucks mar dambe kor ma aha, kaliya waa ku habboon tahay. Si dhakhso leh ayaa ugu habboon raaxadooda ayaa gabi ahaanba xiran doonta. Ma booqan Starbucks bilo. U adkaysan kari maayo cabitaanadooda sharafta leh iyo ka soo qeyb galka xun. Cidina uma aadayso kafeega dhabta ah… Waxaa laga yaabaa inay si fiican u fiicnaadaan haddii ay qirtaan inay runti ku sameynayaan baararka nacnaca ee ku jira koobka ay ka buuxaan xummada.
Aug 14, 2008 at 1: 35 AM
Waxaan xasuustaa markii ay xiddiguhu bilaabeen inay halkan yimaadaan. Waxaa jiray dukaamo yar yar oo badan oo ay ku istaagaan qaxwada iyo rooti, ​​waxayna ka saareen meheraddii.
Starbucks waxay ku saabsaneyd calaamadeyn iyo xoog sheegasho. Weydii mid ka mid ah dadka deggan New Hope, PA sida ay dareemeen markii ay xiddiguhu wada baabbe'een laakiin ay ku khasbeen dukaankii ay deggenaayeen si ay ugu adeegaan dalxiisayaasha iyo martida.
Starbucks waxay ku guuleysteen inay u adeegaan dadka raadinaya wax ka duwan, ku koray dareen sare iyo mid gaar ah, ka dibna jeexjeexay cunahooda iyaga oo u oggolaanaya inay dhammaan madaxyadooda u socdaan. Hadda waa uun hadal moodel iyo summad kale oo naqshadeeye ah.
Kaliya fiiri tirada IPhone-yada aad ku arki doontid in lagu dhex adeegsanayo, iyo tirada boorsooyinka naqshadaha, iyo makbook-yada. Waqti badan kuma qaadaneyso in la ogaado dadka badankood inay aadaan halkaas si ay u muujiyaan sida ay u fiican yihiin. Intooda badani ma ogaan doonaan espresso wanaagsan ama cappuccino haddii qaar barista yar oo hibo leh oo leh timo cagaaran iyo daloolin ay ku tuuraan wejigooda iyagoo si xanaf leh u socda.
Aug 14, 2008 at 8: 52 AM
Waa maxay sheeko wanaagsan - wax wadayaasha dukaamada silsiladdu waa inay u sameeyaan akhriska looga baahan yahay shaqaalahooda.
Waligay kumaan helin dhadhamin Starbucks, anigoo doorbidaya inaan hoos u dhigo $ 1.50 koob ballaaran oo kafeega fud fudud ee Panera Bread ah. Sidoo kale, Panera weligeed lacag kama qaadin gelitaanka internetka, taas oo ka dhigaysa dukaankooda meesha ugu habboon ee lagu caweeyo.
Panera ma qumman yahay? Nope. Sida Starbucks oo kale waxay u maraan shaqaale joogta ah iyo isbeddelo maamul oo leh heerar tayo oo kala duwan maalinba maalinta ka dambeysa.
Waxaan u maleynayaa inay tahay sababta aan u doorbido sameynta iyo cabitaanka kafeega guriga.
Aug 15, 2008 at 10: 38 AM
Doug, soo koobid heer sare ah oo aan ku raacsanahay macaamiil iyo suuqleyba.
Laba ka mid ah carruurtayda ayaa ahaa barista (kuma jiraan Starbucks) tanina waa mowduuc kulul oo kuwa shirkadda ku jira aysan fahmi karin. Starbucks (iyo dhammaan dukaamada qaxwada) waa in diiradda la saaraa khibrada guud. Haddii kale, maxaad u bixinaysaa qiimaha sarreeya?
Agoosto 15, 2008 saacaddu markay ahayd 4:33 PM
ANIGA: JOOGTII HORE EE JOOGTADA BARISTA
Post wanaagsan Doug! … Isku mid Seattle. Mahadsanidiin ilaah baa jira marwalba in kafiican “runta” kafeeyaasha hareerahooda ah Dabcan, Starbucks waa wax weyn oo had iyo jeer mashquul ah, laakiin adeegooda iyo tayadooda ayaa sii dhacaya.
Agoosto 15, 2008 saacaddu markay ahayd 10:37 PM
Falanqeyn wanaagsan oo ku saabsan sida summaddu u duudduubtay, waxaanan aaminsanahay, lumay. Waxaan daawanayay tan labadii sano ee la soo dhaafay. Maxaa mar ahaa waayo-aragnimo ka dhigtay Starbucks mid ka duwan ayaa lumay iyada oo silsiladdu ay noqotay mid aan u fiirsan sida macaamiisha loola dhaqmay. Waxay noqotay wax aan shakhsiyan ahayn, muujinta kama dambaysta ahi waa wadis-dhex mara. Waad gaari ku dhex mari kartaa MacDonalds oo aad ka qaxweyn kartaa. Starbucks mar dambe may ahayn "kaalinta saddexaad."
Waad ku mahadsantahay falanqeyn xeel dheer.
Agoosto 16, 2008 saacaddu markay ahayd 2:38 PM
Waxaan barista ka ahay Starbucks. Waxaan halkaas ka shaqeynayay 2 sano oo aan tirinayay… maalintii iigu dambeysay waa Sabtida soo socota. Kaliya maahan inaan aadayo iskuulka, laakiin waxaan ka jiran ahay Starbucks. Waxaan u wareegi karaa bakhaar ku yaal aagga aan aadayo iskuulka, laakiin gabi ahaanba ma doonayo inaan sidaas sameeyo.
Waan jeclaan jiray shaqadayda. Dukaankayga waan jeclaan jiray. Waxaan jeclaan jiray Starbucks. Waxaan ka bilaabay dukaanka qurxinta ee Gresham, OR. Waxay ahayd mid si caadi ah mashquul u ah, laakiin wali waxaan haystay wakhti aan ku barto kuna raaxaysto macaamiishayda, walina waxaan haystay wakhti aan ku ogaado kuna raaxaysto shaqaalahayga. Ma aha in aan ku xuso maareeyuhu wuxuu ka mid ahaa nooc. Kadibna waa inaan u beddelaa bakhaar ku yaal Vancouver, WA. Vancouver, waxaan ka shaqeeyaa dukaanka caanka ah ee "had iyo jeer runti runtii mashquul badan" (Waxaan taas ka helayaa qof kasta oo aan u sheego dukaan aan ku shaqeeyo). Runtii runtii mashquulku waa hadal fududeyn waxaana nahay halyeeyada Starbucks ee aad uga hadasho maqaalkaaga, waana kufilanay. Waxaa jira dukaamo kafee weyn oo maxalli ah, waana ku raaxeystaa inaan u tago halkii aan ka aadi lahaa shirkaddayda! Taasi waa maalin murugo u leh Starbucks marka shaqaalahaaga halkii ay ku siin lahaayeen waqtiga maalinta.
Difaacayaga iyo kuwa kale ee Starbucks baristas, waxaan si fiican ugu shaqeyneynaa waxa nala siiyay. Ma ahan inaan xoqo geeskayga, laakiin laba sano ka dib, waxaan ahay barista weyn. Waxaan daneeyaa cabitaanka aan sameeyo iyo macaamiisha aan siiyo. Waqti ayaan qaadaa si aan ula sheekaysto macaamiishayda oo aan ku barto markay joogaan daaqaddayda-daaqadda ama miiskayga markii aan baarka fadhiyo. Waan ogahay in baristooyin badan ay qaateen maskaxdii “burger-flipping” oo ay dhinac iska dhigeen jacaylkii ay u qabeen shaqada, laakiin qaar badani ma dhicin waana iyaga kuwa isku haya waxa ka haray Starbucks.
Shakhsiyan, waxaan lumiyey iimaankeygii iyo jaceylkii aan u qabey Starbucks kaliya maahan in bakhaarkayga uu yahay dukaan gubtay, laakiin sababta oo ah sida naloola dhaqmo sidii shaqaale. Waxaa laga yaabaa inay kaliya tahay dukaankeyga, laakiin runtii way ku xun tahay halkaas iyo iyada dartiis iyo bakhaarro la mid ah, Starbucks wuxuu noqday markab quusanaya. Waxaan sidoo kale ka shaqeeyaa Red Robin oo si fiican ayaan halkaas ugu daaweeyaa. Xaqiiqdii waan jeclahay shaqadayda halkaas. Waan jeclahay inaan shaqeeyo oo waxay iga dhigeysaa shaqaale fiican sababtaas darteed.
Waxaan soo maray dhamaan tababarkii iyo xiisihii uu Howard Schultz sameeyay horaantii sanadkaan markii horena waxaan ahaa gung-ho, laakiin tan iyo markii aan lumay iimaankaygii waxaan bilaabay inaan gabi ahaanba ka tago shaqadayda. Maqaalkaagu waa mid ay tahay inuu arko Schultz. Markaa laga yaabee inay noqon doonto wicitaanka baraarujinta ee uu u baahan yahay.
Feb 15, 2009 markay ahayd 1:18 PM
Ma ogtahay sida aad naftaada ugu sheegto inaad waxbarto sababtoo ah buugaagtii shahaadooyinkaaga ayaa hortaada laga furay? Laakiin dhab ahaantii waxaad riixaysaa "turunturoodaan" si aad u hesho qoraallo xiiso leh oo la akhriyo?
Haa si fiican, waxaan la kulmay taada oo waxay ahayd inaan qoro si aan kuugu sheego inaan aad ugu riyaaqay. Waxaan u siiyay suulka kor, sidaa darteed dad badan ayaa ka soo hor mari kara oo ku raaxeysan kara sidoo kale.
May 20, 2009 at 5: 36 AM
Waad ogtahay waxa iga yaabiyey. Sidee ufiican yahay khadka Mc Cafe. Kafeega Mc Donald in ka badan $ 3 koob ayaa umuuqday xoogaa yar.
Markii aan isku dayey ka dib aad ayaan u murugsanahay oo waxaan aad ugu sii socdaa meeshaas sidii goor dambe.